Uyenza njani iakhawunti ye-Skype: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
I-Skype yenye yezona zicelo zisetyenzisiweyo kwiminyaka emininzi. Ekuqaleni yayinokusetyenziswa kuphela kwiikhompyuter, nangona kangangeminyaka singayikhuphela kwiifowuni eziphathwayo okanye kwiitafile. Esi sicelo saziwa ikakhulu kuba sasivumela ukuba senze iminxeba kunye nevidiyo simahla sizihlobo zethu kunye nosapho. Umsebenzi osasaziwa kakhulu namhlanje.
Uninzi lwenu sele selunayo iakhawunti kuyo. Nangona abanye bengenayo iakhawunti ye-Skype, kodwa bafuna. Le yinto esinokuyenza, ngendlela elula. Kukho iindlela ezimbalwa zokuvula iakhawunti kwi-app eyaziwayo. Apha sixelela ukuba kunokwenzeka njani.
1 Ukuba unayo i-akhawunti ye-Hotmail / ye-Outlook
2 Yenza iakhawunti kwi-Skype
3 Guqula ulwazi lweakhawunti
Ukuba unayo i-akhawunti ye-Hotmail / ye-Outlook
Abasebenzisi abaninzi, ngakumbi abo basebenzisa iiWindows kwikhompyuter yabo, kunokwenzeka ukuba baneakhawunti yeMicrosoft. Kwakhona i-akhawunti ye-Hotmail (ngoku eguqulelwe kwi-Outlook) yinto esinokuyisebenzisa. Oku kuthetha ukuba ngekhe senze iakhawunti entsha kwi-Skype. Kuya kuba yimfuneko ukungena kwisicelo usebenzisa idilesi ye-imeyile yale akhawunti kunye negama lokugqitha esinxulumene nalo. Ke lolona khetho lukhululekileyo.
Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba i-Skype yeyakwaMicrosoft. Ngesi sizathu, iiakhawunti eqongeni ziye zadityaniswa, ukuze iakhawunti yeMicrosoft ikuvumele ukuba ufikelele kuzo zonke iinkonzo zenkampani ngokuthe ngqo, ukunqanda ukuba kufuneka wenze iakhawunti kuyo nganye, njengoko kwenzekile ngaphambili. Le nkqubo isigcinela ixesha elininzi, kunye nokuthintela ukwenza ii-passwords ezintsha.
Ngoko ke, Into oyifunayo kukukhuphela i-Skype kwikhompyuter yakho okanye kwi-smartphone, Kuxhomekeka kuhlobo ofuna ukulusebenzisa. Xa uyikhuphele, kwiphepha lasekhaya, apho ucelwa ukuba ungene okanye wenze iakhawunti, kuya kufuneka ufake idilesi yeakhawunti kunye negama lokugqitha. Emva koko, uya kuba ngaphakathi kwesicelo ngokuqhelekileyo.
IMicrosoft isungula iSkype Lite, uhlobo olukhanyayo lwamazwe asakhulayo
Kodwa banokubakho abasebenzisi abangenayo iakhawunti yeMicrosoft. Kule meko, ukuba ufuna ukusebenzisa i-Skype kuya kufuneka wenze iakhawunti kwisicelo. Inkqubo ayibonisi naziphi na iingxaki malunga noku. Nokuba siyenza emnxebeni okanye kwikhompyuter, kufuneka kuqala sikhuphele usetyenziso kweso sixhobo. Kwi-Android nakwi-iOS inokwenziwa kwivenkile, kwiMicrosoft sinokukhangela kuGoogle, kwiwebhusayithi yeSkype okanye sisebenzise iMicrosoft Store.
Nje ukuba sikhutshelwe kwaye sifakelwe, siyivule size sifike kwiphepha lasekhaya lesicelo. Iqhosha elimhlophe livela embindini wesikrini kunye nombhalo «Ngena okanye Yenza«. Kuya kufuneka ucofe eli qhosha, ukuze ibhokisi entsha ivele kwiscreen. Kuyo, uyacelwa ukuba ufake iakhawunti, ukuba unayo. Apha ngezantsi kolu khetho kukho isicatshulwa esithi »Awunayo iakhawunti? Yenza enye. " Kule ndlela kufuneka sicinezele.
Inkqubo yokwenza iakhawunti kwi-Skype ivula apha ngezantsi. Into yokuqala ebuzwayo kukufaka inombolo yefowuni. Nangona nje ngezantsi sinokhetho olusixelela loo nto singasebenzisa idilesi yemeyile endaweni yoko. Ngamnye kufuneka akhethe okubonakala kuluncedo kakhulu malunga noku ukuba neakhawunti kwisicelo. Nje ukuba ufake i-imeyile okanye umnxeba, kuya kufuneka wenze ipassword yale akhawunti. Njengoko besesitshilo, kukho inani lezikhokelo zokwenza iiphasiwedi ezinamandla, ekufuneka yenziwe.
Emva kokufaka iphasiwedi, U-Skype usicela ukuba singenise igama lethu lokuqala nelokugqibela. Ungafaka igama lakho lesidlaliso ukuba ucinga ukuba libhetele okanye usebenzise igama lekhowudi. Le yinto efunekayo ekudalweni kweprofayili kwisicelo. Nangona sihlala sinethuba lokuyiguqula kamva kuqwalaselo, nje ukuba sineakhawunti. Emva kwezi datha, kuya kufuneka ungene kwilizwe kunye nomhla wokuzalwa komsebenzisi weakhawunti.
Xa oku kwenziwe, i-imeyile yokuqinisekisa iya kuthunyelwa kwiakhawunti esele isetyenzisiwe, okanye iSMS kwinombolo yefowuni. Kuzo zombini iimeko, ikhowudi ingenisiwe, Kuya kufuneka sincamathise kamva kwi-Skype. Xa sinale khowudi, cofa nje kwiqhosha elilandelayo eliluhlaza. Ngala manyathelo, inkqubo yokudala iakhawunti ngoku igqityiwe. Ke sinokuqala ukusebenzisa usetyenziso.
Guqula ulwazi lweakhawunti
Ulwazi olucelwa ngu-Skype ukuba senze iakhawunti luyindlela yokwenene. Kufuneka sifake olu lwazi ukuze sikwazi ukuvula iakhawunti okanye iprofayile kwisicelo. Nangona inyani yile yokuba kamva sinako lungisa le ngcaciso ukuba siyibona iyimfuneko. Ke uya kuba nakho ukutshintsha idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, igama leprofayile okanye nomhla wokuzalwa, ukuba ucinga ukuba kungcono ukwenza njalo. Ke le yinto ehlala ihleli inokwenzeka. Ukongeza, indlela yokwenza ilula ngokwenyani kwisicelo.
Nje ukuba singene kwi-Skype, kufuneka sijonge phezulu ngasekhohlo kwesikrini. Apho siya kubona ukuba igama lethu liyavela, ngaphezulu nje kwebar yokukhangela ekwisicelo. Ngasekunene kwegama lethu kukho i-icon enamanqaku amathathu, njenge-ellipsis ezintathu. Kuya kufuneka ucofe kuyo, ukuvula imenyu yokuma. Kule menyu, cofa kwindawo yoqwalaselo.
Apha siya kuba nakho ukutshintsha idatha esiyifunayo. Ukuba sifuna ukuba negama leprofayile elahlukileyo, okanye ukusebenzisa idilesi ye-imeyile entsha yeakhawunti, sinokuyenza kweli candelo. Kulula kakhulu ukuyitshintsha, ukongeza ekubeni sikwazi ukuyenza nanini na sifuna. I-Skype sisicelo esiguquguqukayo kule nkalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyenza njani iakhawunti ye-Skype